Premier Ventures Co, Ltd is formed in June 2016 by very reputable companies from Malaysia which each has more than 20 years’ experiences in Telecom, Information and Communication Technologies Industry. The products and services has been provided to all the neighboring countries such as Singapore, Cambodia, Nepal, Vietnam, Korea and Malaysia. Company will provide the same quality Turnkey Telecommunication and ICT Solutions, Project Management and Consultancy, implementation and full local support with strong and well-trained engineering team to provide long-term sustainable products and services to Myanmar.
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ တွင် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် အောင်မြင် ကျော်ကြားလူကြိုက်များခဲ့သော ကုမ္ပဏီစုကြီးသည် Premier Ventures Co., Ltd ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် မြန်မာပြည်တွင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများ ဖြစ်ကြသော စင်္ကာပူ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ နီပေါ၊ ဗီယက်နမ်၊ ကိုရီးယား နှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ တို့တွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှု များ ကို လက်ရှိ အသုံးပြု နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ပြီးပြည့်စုံသော ဆက်သွယ်ရေး စနစ် နှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၊ ပရောဂျက်များအား စီမံခန့်ခွဲပေးခြင်း နှင့် အကြံပေးခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများကို ကျွမ်းကျင် ဝါရင့် အင်ဂျင်နီယာ အဖွဲ့များနှင့် အရည်အသွေး ပြည့်ဝသော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် အတူ နှစ်ရှည် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို မြန်မာပြည်တွင် Premier Ventures Co., Ltd မှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါသည်။
To bealeader in information technology industry by providing advanced, innovative, and high quality of products and services to the customers, as well as providing good return to the stakeholders.
အဆင့်မြင့် ဆန်းသစ်သော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် အပြန်အလှန် ကောင်းကျိုး အထောက်အပံ့များ ရရှိကာ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ ရပ်ဝန်းတွင် ဦးဆောင်သူ ဖြစ်စေရမည်။
Endeavor to become prominent IT provider in Myanmar.
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထင်ရှားကျော်ကြားသော သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ ပံ့ပိုးပေးသူ ဖြစ်လာရန် အစဉ်ကြိုးစား အားထုတ်ပါမည်။